दीपक लोहनी	 प्रकाशित ४ माघ २०७८ १८:०१
१. काल विभाजनको लघुकथा – बुद्धि
‘यसरी बोटै रित्तो हुनेगरी फूल नटिप्नु भएको भए हुन्थ्यो ! कस्तो रित्तो देखियो फूलबारी ।’ बिहान मोर्निङ वाकको बहानामा फूल टिपेर हैरान पारेका थिए । आज ढुकेरै फेला पारिन् रमाले ।
‘ए, आज घरमा पूजा थियो, त्यै भएर अलिकति टिपेको ।’ गीताले मुन्टो तल गर्दै जवाफ दिई ।
एकदिन रमा डुल्दै गीताको घरसम्म पुगी । घर अगाडिको आँगन टुक्रुक्क एक्लै बसेको थियो । रमालाई कस्तो कस्तो लाग्यो, नभनी रहन सकिन । ‘यत्रो आँगन खाली राखेको छ । यसो फूलसुल लगाए त पूजाआजामा काम लाग्थ्यो नि ।, रमाले गीतातिर हेर्दै भनिन् ।
गीता केही बोलिन । हिजो चार थुङ्गा फूल के टिपेकी थिएँ । आइपुगिन् अर्ती दिन । बुढा मेयरमा उठ्दैछन् । चुनाव जिते घरको माथिल्लो तला थपिन्छ । ढुङ्गा बालुवा राख्ने ठाउँ हुँदैन । अहिले फूल बिरुवा लगायो, सबै उखेलेर फाल्नु पर्छ । कसकसलाई सुनाउनु घरका कुरा ।
‘रोप्ने योजना बनाउँदै छु । अहिले समय मिलेको छैन ।’ गीताले यत्ति भनी ।
‘फूल रोप्न पनि साइत हेर्नुपर्ने । अल्छीका दशथरी बहाना !’ रमा जसरी आएकी थिई उसैगरी बाटो लागी ।
चोकमा पार्टीका जिल्ला सदस्य, स्थानीय वडा अध्यक्ष, आगामी स्थानीय चुनावमा नगरप्रमुखका प्रवल दावेदार, ‘मेयरमा चुनाव जितेपछि यो नगरको मुहार बदल्छु । वडा अध्यक्षले मात्र केही गर्न सक्दो रहेनछ । काम गर्ने माहोल नै मिलेको छैन नगरमा’ भन्दै चर्को गफ दिँदै थिए । रमाले झट्ट चिनिहाली । उनी तिनै गीता पति थिए ।
‘बुढाबुढी एउटै ड्याङका रहेछन् । बहानाबाजीले देश हाँक्ने ।’ ऊ अगाडि बढी ।
रमा घरमा पुग्दा घरको नक्सा नै बदलिएको थियो । ‘हेर न, बाटो हिंड्नेले फूल टिपेर हैरान पारे । बोटै उखेलेर फाल्दिएँ । के टिपेर तिनका भगवान् पुज्दा रहेछन् हेर्छु म पनि । अब यहाँ एउटा शीतल ताप्ने मञ्च बनाउँछु ।’
रमा भुतुक्कै गली । थचक्क भुइँमा बसी ।
‘हरे शिव नारायण, यी मान्छेको बुद्धि । हेर, अरूको रिसले आफ्नो घर उजाडेको । यी पनि सानोतिनो नेता जो परे । ‘
(नेपाली लघुकथामा ५० को दशकलाई सक्रियकाल भनिन्छ । यसै समयदेखि लघुकथाकार लक्ष्मीप्रसाद पौडेल साहित्यमा देखिएका हुन् । पछिल्लो समय उनी नेपाली लघुकथाको विकासमा सक्रिय रुपमा लागेका छन् । उनी लघुकथा समाजको प्रदेश स्तरीय समितिको सचिव पनि हुन् ।
कथाकार लक्ष्मीप्रसाद पौडेल मोफसलमा रहन्छन तर उनीको सृजनाले सिधै लघुकथाको केन्द्रमा हमला गर्छ । उनी लघुकथामा समाजको विकृति र विसंगतिहरू खोज्छन् । पीडा र अभाव पौडेलको लघुकथाको मुटु हो ।
प्रस्तुत लघुकथा “बुध्दि” लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको एक चोटिलो लघुकथा हो । दुई महिलाबीचबाट सामाजिक कुराको उठान गर्दै लक्ष्मीप्रसादले अन्त्यमा नेताको दिमागको सटिक चित्रण गरेका छन् ।)
२. सङ्ग्रहभित्रको लघुकथा – समयको माग
टुकादेवी पौडेल आचार्य
“हेल्लो सोनी ! आजको मेरो टिकटक त हिट भयो नि … हेरिस् ? आज त कति धेरै भ्युअर्स बढेका । लाइक कमेन्ट् त कति हो कति ! दीपकले भोलि लाइभमा बस्न इन्भाइट् गरेको छ । तँ पनि आइज न यार् टिक्टकमा । तँ पनि टिकटक आइडी बना न । तेरा ती साहित्यिक साथीले सुनकै प्लेनमा उडाउँछन् कि झैँ गर्छेस्”, निकै हौसिँदै फोनमा भनी सिन्जाले ।
“राम्रै भएछ त । तेरो टिकटक भाइरल बना न त सिधै फेसबूकमा पोष्ट हुनी गरेर । किन अर्कालाई खिसीटिउरी गर्छेस् ? तँलाई तेरो टिकटक प्यारो भएजस्तै मलाई नि मेरो साहित्य प्यारो छ, बुझिस् । मलाई त्यो लाइभसाइभमा बस्नी फुर्सद छैन । एउटा लघुकथा लेखेर सिद्द्याउँदै छु ।”, सोनिकाले कड्केरै जवाफ दिई ।
“हेर न ! नखरा पारेकी । मैले त तेरो लेख रचनाको पेजमा लाइकको इमोजी, गूडलक, ब्युटिफूल, नाइसजस्ताको स्टिकर मात्रै देख्छु त । त्यैपनि लेखको अन्तमा यसो हेर्न लायक फोटो राखिस् भने । अझ तेसैमा पनि भलाद्मी भएर हार्दिक आभार हजुर भन्ने रिप्लाई हान्छेस्। तँ धेरै भद्र नबन् के ! मान्छे कति व्यस्त छन् यहाँ ! तँलाई समयको माग नै थाहा छैन । हाम्रो १४/१५ सेकेन्डको भिडियो त मनलाई नलाई हेर्छन् मनोरञ्जन हुनिखाले त । अनि तेरो लेख भनेर खुब पढ्लान् नि पाठकले ! धेरै भावुक नबन् है केटी ।”, सिन्जाले व्यङ्ग गर्दै भनी।
“छोड्दे सिन्जु ! जे सुकै भए नि आ-आफ्नो रुचिअनुसार हो सामाजिक सञ्जालमा जोडिनी । किन बित्थैमा झर्कोफर्को गर्नुपर्यो ? आखिर ! तँ पनि दर्शककै भोकी होस् के रे । तँ पनि भाइरलवालासँग ड्युट गरेर होस् कि नमरे पनि मरेको एक्टिङ्ग गरेर होस्, दर्शक तान्न खोज्छेस् के रे ! किन सुधी बन्न खोज्छेस् हँ ? तेरो टिकटक क्षणिक हो । सहित्य जीवन्त छ, यो युग युगको माग हो, बुझिस् ! कमेन्ट र लाइकले केही फरक पर्दैन । बुझिस् केटी ?”, सोनिकाले फोन काटी।
(लघुकथाकार टुकादेवी आचार्यको लघुकथासङ्ग्रहको नाम हो “बार्दली” । यसै सङ्ग्रहबाट प्रस्तुत लघुकथा लिइएको हो । लघुकथाकार टुकादेवी लघुकथा समाज नेपालको गण्डकी प्रदेश सदस्य हुन् । उनी नारी संवेदनाका विषयहरूलाई समसामयीक पाराबाट आफ्ना लघुकथाहरूमा प्रस्तुत गर्दछिन् ।
प्रस्तुत लघुकथा “समयको माग”मा लघुकथाकार टुकादेवीले दुई महिला पात्रहरूको रुचिलाई समयको मागसँगै प्रस्तुत गरेकिछिन् । दुबैका दुबै रुचिलाई दुबैले महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । तर कुन रुचि समयको माग हो त ? कथाकार टुकादेवीले बोलेकी छैनन् । कथामा कथाकार बोल्नु नहुने सिद्धान्त लघुकथाकार टुकादेवीले पालन गरेकी छिन् । सिद्धान्तका केही बुदालाई हेर्दा यो लघुकथा अब्बल छ ।)
३. समूहभित्रको लघुकथा – धर्म र संस्कार
“मम्मी धर्म र संस्कारमा के फरक छ ? “छोरीले प्रश्न गरी।
“यी दुवै कुराहरुको अर्थ बेग्लै भए पनि परस्परमा यिनीहरु एकार्काका परिपूरक हुन् । मान्छेहरुका लागि यी दुवै आवश्यक छन् ।”, मैले भनें ।
उसले फेरि सोधी, “कसरी ?”
“धर्म नगर्ने मान्छे समाजकै लागि निर्दयी र कठोर मानिन्छन् । संस्कारविनाको मान्छे पशुसमान हुन्छ । खानु, सुत्नु र सन्तान उत्पादन गर्नबाहेक अरु केही लक्ष्य हुन्न । मान्छेले धर्म मान्नुभनेकै संस्कारलाई अँगाल्नु हो ।”, फेरि अर्थ्याएँ ।
“त्यसो भए हामी पनि रविनहरुले जस्तै ठुल्ठुला पुराण, पूजाआजा लगाऊँ न ! धर्म नि गरिने संस्कार पनि बँच्ने ।”, उसले प्रस्ताव राखी।
“धर्मको अर्थ त्यस्तो होइन । पूजाआजा गर्नु, पुराण लाउनु परम्परागत संस्कार ग्रहण गर्नु हो । तर सबैभन्दा ठूलो धर्म मानव धर्म हो । यो आफ्नो परम्परागत रीतिथिति, संस्कारभित्रै पर्छ । जुन घरको परिवार संस्कारहीन हुन्छ, तिनीहरु कठोर, निरङ्कुश, नास्तिकसमान हुन्छन् । यसलाई संस्कार बचाएको भनिन्न ।”, मैले बुझाएँ ।
उसले फेरि उत्सुकता तेर्साई, “अनि पुराण, पूजाआजा धर्म र संस्कारभित्र पर्छ भने किन नगर्ने ?”
“तिमीले धर्म र संस्कारलाई पूजाआजा र पुराण भन्ने मात्र बुझ्यौ छोरी ? संस्कार भनेको सबैप्रति सद्भाव, मायाप्रेम बाँड्नु, वृद्धवृद्धालाई सेवा, आदर गर्नु र असहायहरुलाई सहयोग गर्नु हो । जसले मानव धर्मको भूमिका खेलेको हुन्छ ।”, मैले अर्थ्याएँ ।
“तर मम्मी, रविनहरुले पुराण लाएर धर्म कमाउँदै छन् भनेर सबैले भन्छन् त ?”, उसले अझै प्रश्नमा जोड दिई ।
मैले बुझाउने प्रयास गरेँ, ” त्यो धर्म मात्र भ्रम हो । आफ्नो वृद्धवृद्धा आमाबाबुलाई वृद्धाश्रममा राखेर, असाहाय बालबालिकालाई काम दलाउँदै, निर्जीव मूर्ति पुजेर के गर्नु ? जिउँदा भगवान् समान आमाबाबुलाई लखेट्ने कुन संस्कार र धर्मभित्र पर्छ ? त्यो धर्म होइन । मानव धर्म नै सबैभन्दा महान् धर्म हो । मानव धर्म भनेको अशक्त, असाहयको सेवा गर्नु हो ।”
उसले कुरा बुझेझैँ गरी । म सासूआमालाई औषधी दिन कोठामा पसेँ ।
(नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च फेसबुकमा देखिने अन्य लघुकथा समूहहरूमध्ये पृथक् समूह हो । यसले लघुकथाको विकास र बिस्तारको साथसाथै मानवसेवाको कार्य पनि सँगसँगै गर्दै अघि बढिरहेको छ । लघुकथामा विषयगत सामूहिक सङ्ग्रह र वार्षिक स्मारिका प्रकाशन गर्ने काम पनि यस लघुकथा मञ्चले गरिरहन्छ ।
केही समय पहिले आचार्य प्रभाले यसै समूहमा “धर्म र संस्कार” लघुकथा पोष्ट गरेकी थिइन् । आचर्य प्रभा ४० वर्षदेखि अनवरत् साहित्यमा कृयाशील स्रष्टा हुन् । काव्य र काव्यअन्तर्गतको गीति विधा प्रभाको मूल विधा हो । उनीका थुप्रै गीतहरू रेकर्ड भएका छन् भने केही बहूत चर्चित गीतहरू पनि छन् । पछिल्लो समय आचार्य प्रभा लघुकथामा सक्रिय छिन् ।
लघुकथाकार आचार्य प्रभा लघुकथामा आदर्शवादी धारको वकालत गर्ने लघुकथाकार हुन् । मानव, समाज, धर्म, संस्कृति र राष्ट्रमा प्रेम, विश्वास, सद्भाव र संस्कार हुनुपर्ने कुराहरू प्रभा आफ्ना लघुकथाहरूमा सजिलै घुसाउँछिन् ।प्रस्तुत लघुकथा “धर्म र संस्कार” मानव सेवामा केन्द्रित लघुकथा हो । लघुकथामा आचार्य प्रभाले बालसुलभ जिज्ञासाबाट समाज र समस्त प्राणीहरूलाई वृद्धा बाआमाको सेवा गर्न सिकाएकी छिन् । यो लघुकथा साहित्यपोस्टकाे साप्ताहिक लघुकथा प्रतियोगिताको १९ औँ भागमा उत्कृष्टसमेत भएको थियो ।)
४. समसामयीक लघुकथा – स्पष्टीकरण
दोस्रो दिन कार्यालयमा हाजिर हुन पुगेका सूर्यमान र चन्द्रमानलाई हाजिर गर्न दिएनन् । उनीहरूलाई प्रमुखले कार्यकक्षमा बोलाएर अघिल्लो दिन बिनासूचना गयल भएको बारे स्पष्टीकरण मागे ।
“हाकिमसाप, उपस्थित हुन सकिएन किनकि हिजोको झाँकीमा मैले ढोल बजाउनु पर्ने थियो । यो दिन हाम्रो परिवारको सदस्यमध्येबाट एक जनाले ढोल बजाउने परम्परा छ । जुन तीन पुस्तादेखि चल्दै आएको परम्परा हो । यसैले ड्युटीमा हाजिर हुन सकिएन ।”, सूर्यमानले स्पष्टीकरण दियो ।
“सरकारको तलब खाएर त्यसो भन्न पाइन्छ ?”, हाकिम कड्किए ।
“किन पाइँदैन ? पहिले पहिले सरकारी बिदा हुन्थ्यो । देशैभरि यो दिनलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा पालन गरिन्थ्यो । आज व्यवस्था फेरिँदैमा नपाइने हो र ?”, सूर्यमान पनि के कम ! उसले निर्भीकताका साथ प्रतिवाद गर्यो ।
“अनि तिमी चन्द्रमानचाँहि किन गयल ? बिनासूचना बिदा लिन पाइन्छ ? यो तिम्रो बाैबाजेको बिर्ता हो मनपरि गर्नलाई ?”, हाकिम अनापसनाप बोल्न थाले ।
“हो, यो हाम्रै पुर्खाको बिर्ता हो । उनीहरू थिए र त आज हामी छौँ । शिरमा ढाका टोपी छ । दौरासुरूवाल ढल्काएर घुम्ने मेचमा बस्न पाएका छौँ । यो चन्द्रसूर्य अङ्कित ध्वजा फर्फराउन पाएका छौँ ।”, चन्द्रमानले आक्रोश व्यक्त गर्यो ।
“चुप लाग्नोस् तपाईँहरू । देश अग्रगमनतिर लम्किरहेको बेला यसरी झिनामसिना कुरामा अल्मलिने होइन । जानोस्, हाजिर गरेर आआफ्नो कक्षमा ।”, हाकिमले आदेश दिए ।
सूर्यमान र चन्द्रमानले एकार्कालाई हेरे अनि कक्षबाट बाहिरिए । दुवैको आँखा, कान र अनुहार राताराता देखिन्थे । मानौँ, आक्रोश अझै छछल्किएर पोख्न बाँकी छ ।
(भर्खरै एकता दिवस मनायौँ हामीले । देशमा गणतन्त्र स्थापनाको नाममा हामीले यस्तो महत्त्वपूर्ण दिवसहरूलाई बिस्तारै भुल्दै छौँ । प्रस्तुत लघुकथा “स्पष्टीकरण”ले देशको महत्त्वपूर्ण दिवस भुल्न खोज्नेहरूलाई सम्झाउने कोसिस गरेको छ । लघुकथा समय सान्दर्भिक छ ।
लघुकथाकार समीर पाख्रिन खरो, हक्की र अध्ययनशील स्रष्टा हुन् । उनी अग्रज स्रष्टाको सम्मान र अनुज स्रष्टालाई माया गर्ने सोचका स्रष्टा हुन् । पछिल्लो समय उनी लघुकथामा मज्जाले खेलिरहेका छन् ।
प्रस्तुत लघुकथा “स्पष्टीकरण” देशको स्वाभिमान र एकताको लागि लेखिएको लघुकथा हो । लघुकथाकार पाख्रिनले सूर्यमान र चन्द्रमानको माध्यमबाट थाहा नपाउँदोगरी राष्ट्रिय झण्डाको बिम्वको सहयोगले देशभक्ति बोलेका छन् । लघुकथा खुल्ला समापनमा लेखिएको छ र बिज वाक्यले पाठकलाई अझै केही कुरा भन्न बाँकी रहेको आभाष दिन्छ र अन्त्यमा पाठकै बोल्न उत्प्रेरणा जगाउँछ ।)
५. मलाई मन परेको लघुकथा – भावना
“बाबा ! म तपाईंले भनेझैं प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएँ । घुमाउन लान्छु भन्नुभएको थियो ! कहिले लाने ?”, आठ वर्षे छोरीले बाबुलाई आफ्नो बाचा सम्झाउँदै भनी ।
बाबु कथा लेख्नमा व्यस्त थियो ।
पुनः छोरीले सोही प्रश्न दोह्रोयाई ।
एक्कासी बाबुले उत्तर दियो, “जाने भइछस् घुम्न ! जा, नत्र भेटलीस् । लेखेको देख्दिनस् ?”
छ‍ोरी रुँदै रुँदै आमा भएतिर गई।
भित्रबाट आमा भुतभुताई, “कस्तो विडम्बना ! काल्पनिक पात्रको भावना बुझ्ने मान्छेले किन जिउँदा मान्छेको भावना बुझ्दैनन् ?”
(भारतीय भूमि मणिपुरमा रही नेपाली भाषाको सेवामा समर्पित छन् देवीप्रसाद थापा “मामा” । उनी काव्य र आख्यानमा विशेष रुचि राख्छन् । पछिल्लो समय लघुकथालाई मुख्य विषय बनाएर देवीप्रसाद थापा “मामा” साहित्यमा अघि बढिरहेका छन् ।
प्रस्तुत लघुकथा “भावना” भावनामा खेलिएको एक बेजोड लघुकथा हो । यस कथामा कथाकारले पात्रको भावना बुझ्ने क्रममा आफ्नै छोरीको भावना बुझ्न नसकेको विषयलाई उजागर गरेको छ । कथा मर्मस्पर्शी बनेको छ । लघुकथाकार देवीप्रसाद थापा “मामा” यस्तै मनोवैज्ञानिक कथाहरू सजिलै लेखिरहन्छन् ।
यो लघुकथाले थोरै शब्दमा पनि सहजै राम्रो लघुकथा लेख्न सकिने कुराको वकालत गर्दछ ।)
आचार्य प्रभाटुकादेवी पौडेल आचार्यदीपक लोहनीदेवीप्रसाद थापा 'मामा'लक्ष्मीप्रसाद पौडेलसमीर पाख्रिनसाताका लघुकथा
वागमती प्रदेश स्तरीय मौलिक लोकबाजा प्रशिक्षण २०७८ सम्पन्न